BackGround History » Technological University (Maubin)
Technological University (Maubin) was initially established as Government Technical Institute which is 57.872 acres between Sayaygone quarter and football field quarter on the street of Seinn Mya Kanthar on November 3, 1989. It is enhanced as Government Technical College on May 31, 2002. After it had been established on May 1, 2002, opening ceremony was celebrated on June 28, 2003. And then, Government Technological College was enhanced as Technological University on January 20, 2007.
နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မအူပင်)ကို ၁၉၈၉ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ(၃)ရက်နေ့တွင် မအူပင်မြို့ စာရေးကုန်းရပ်ကွက်နှင့် ဘောလုံးကွင်းရပ်ကွက်ကြား စိမ်းမြကန်သာလမ်းပေါ်ရှိ မြေဧက (၅၇.၈၇၂)ပေါ်၌အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(မအူပင်)အဖြစ် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။၂၀၀၂ခုနှစ်၊ မေလ(၃၁)ရက်နေ့တွင် အစိုးရနည်းပညာကောလိပ်အဖြစ် အဆင့်မြှင့်တင်ဖွင့် လှစ်ခဲ့ပါသည်။နည်းပညာကောလိပ် အဆောက်အဦးအသစ်ကို လက်ရှိနေရာ၌ ၂၀၀၂ခုနှစ်၊ မေလ (၁) ရက်နေ့တွင် စတင်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး၊ ၂၀၀၃ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၂၈) ရက်နေ့တွင် အဆောက် အဦသစ်ဖွင့်လှစ်ပွဲကို ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၇ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ( ၂၀ ) ရက်နေ့တွင် နည်းပညာတက္ကသိုလ်အဖြစ်အဆင်မြှင့်တင်ခဲ့ပါသည်။
Technological University (Maubin) is situated near Aung Hate village about three miles in the west of Maubin. It is about 50.14 acres.
နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မအူပင်)သည်ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊မအူပင်ခရိုင်၊ မအူပင်မြို့၏ အနောက်ဘက် (၃)မိုင်ခန့်အကွာ၊ မအူပင်-ရေလဲကားလမ်းဘေး၊ အောင်ဟိတ်ရွာအနီးတွင် တည်ရှိပြီးအကျယ်အဝန်း(၅၀.၁၄)ဧကရှိပါသည်။
There are one of three-storeyed main building with the length of (278) feet, the width (140) feet, the height of (52.5) feet and five of two-storeyed with the length of (165) feet, the width of (50) feet and the height of (37) feet. There are 33 classrooms, one principal room, three management rooms, two stuff rooms, one convocation room, two practical science rooms, one language-lab room and three drawing rooms. There are three one-storeyed workshops which is 140 feet x 60 feet x 24.5 feet. There are ten unit one storey, brick nogging six unit one storey RC and two of six unit two of two storey RC.
နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မအူပင်)၌ ပင်မ (၃)ထပ်ဆောင် (၁)ဆောင်နှင့် နှစ်ထပ်ဆောင် (၅)ဆောင်ရှိပါသည်။ ပင်မ(၃)ထပ်ဆောင် မျက်နှာစာအကျယ်(၂၇၈’)၊ အနံ(၁၄၀’)၊ အမြင့်(၅၂.၅’) ရှိပါသည်။ ဘေးဝဲယာနှစ်ထပ်ဆောင်(၂)ဆောင်မှာ အလျှား(၁၆၅’)၊ အနံ(၅၀’)၊ အမြင့်(၃၇’)ရှိပါသည်။ ကျန်နှစ်ထပ်ဆောင်(၃)ဆောင်မှာ အလျှား(၁၄၅’)၊ အနံ(၅၀’)၊ အမြင့်(၃၇’)ရှိပါသည်။ ၄င်းစာသင်ဆောင်များတွင် စာသင်ခန်း(၃၃)ခန်းရှိပြီး ကျောင်းအုပ်ကြီးရုံးခန်း(၁)ခန်း၊ စီမံဌာနရုံးခန်း(၃)ခန်း၊ စတိုခန်း(၂)ခန်း၊ ကွန်ပျူတာခန်း(၁)ခန်း၊ စာကြည့်တိုက်ခန်း(၁)ခန်း၊ ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမ(၁)ခု၊ သိပ္ပံလက်တွေ့ခန်း(၂)ခန်း၊ Language Lab (၁)ခန်း၊ Drawing Room (၃)ခန်းပါရှိပါသည်။ တစ်ထပ်ဆောင်အလုပ်ရုံအဆောက်အဦး(၃)ခုရှိပြီး ပင်မအတိုင်းများမှာ (၁၄၀’x ၆၀’ x၂၄.၅’)ရှိပါသည်။ ပင်မအတိုင်းအတာ (၁၀၀’x ၃၀’ x၁၉’) ရှိသော(၅)ခန်းတွဲ တစ်ထပ်စားသောက်ဆိုင် (၁) လုံး ရှိပါသည်။ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာအနေဖြင့် ၁၀ ခန်းတွဲတစ်ထပ်အုပ်ညှပ်ဆောင် (၁) ဆောင်၊ ခြောက်ခန်းတွဲတစ်ထပ် RC ဆောင် (၂) ဆောင်၊ ခြောက်ခန်းတွဲနှစ်ထပ် RC ဆောင် (၁) ဆောင် ရှိပါသည်။